သို့ .. အမေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သို့ .. အမေ
သို့ .. အမေ
- ရွှေ ကြည်
Posted by ရွှေ ကြည် on Nov 17, 2012 in Creative Writing | 28 comments
ဦးတင်ဆဲမို့ စိတ်ချလို့နေပါ ချစ်တဲ့အမေ..။
About ရွှေ ကြည်
ရွှေ ကြည် has written 32 post in this Website..
View all posts by ရွှေ ကြည် →
မိုးသားကင်းစင်ပြီး နေသာလင်းလက်တဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ အမေနဲ့အတူတူ
ရွှေ ကြည် says:
လာမည့် တန်ဆောင်မုန်းလရဲ့ လပြည့်ညမှာတော့
ရခဲ့ရင် မရွှေကြည်ဆီလည်း ပို့ပေးမယ်နော်။
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရင်ထဲမှာ နီးနီးလေးပါ ။
မနှိုင်းမဲ့အမေ .. ကျေးဇူးရှင်အမေ …
မေတ္တာ ဂရုဏာ ရှင် အမေ …
အနိုင်းမဲ့အမေ .. ကျေးဇူးရှင် အမေ
မေတ္တာ ဂရုဏာရှင် အမေ …
အစ်မ ရောက်ခါစ စိတ်ဆင်းရဲရင်လေ အမေ့ကို လုံးဝ ဖုန်းမဆက်ဘူး၊ သိလား။
သူက ဖုန်းထဲက လေသံကြားရုံနဲ့ အစ်မ စိတ်ဆင်းရဲနေတာကိုသိလို့။
ဖုန်းမဆက်တာကြာရင်လည်း အစ်မ ဘာအဆင်မပြေဘူးလည်း တွေးနေပြန်ရောတဲ့။
အစ်မ ကတော့ စိတ်ထဲကပဲ ပြောမိတယ်။
“ဖုန်းသာမဆက်ဖြစ်တာပါ။ စိတ်ထဲက တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်လို့။” သူ့ကို အမြဲ တိုင်တည်မိတယ်။
အစ်မ မေး(လ) ယူထားလိုက်နော်။ khaingzw@gmail.com
စိတ်တင်းထားနော် ရွှေကြည်လေး။ အစဉ်ပြေရင် တွေ့ကြမယ်လေ။
ငယ်စဉ်ကပင်ဆုံးမသွန်သင် ရခဲလှတဲ့လူ့ လောက အနေတတ်အောင် ပညာအမွေသာ ပေးခဲ့ပါတဲ့အမေ….
အမေဆိုတာ သ္မီးဘ၀မှာ သ္မီးအတွက်တော့ ဘာနဲ့ မျှ အစားထိုးမရ ဘာနဲ့ မျှလဲလို့ လည်း မရပါအမေ…..
အမေ့ကိုချစ်တာ ပမာတင်စား မိုးကောင်းကင်ဆိုတာ အမေ့ရင်ခွင် မြေကြီးဆိုတာ အမေ……
ဒီမိုးကောင်းကင်စကြာဝဠာတိုက် မြေမဟာပထ၀ီထု အမေဆိုတာ နှိုင်းတုစရာမရှိလို့သ္မီးနှလုံးသွေး
တို့ ရပ်သမျှ မပြိုလဲတဲ့အထိ ချစ်မြတ်နိုးရတာအမေပါဘဲ………………………..။။
လေးခင်ခရေ တကယ်ပို့ပေးနော် ရွှေလင်ဗန်းနဲ့နော်..။
ကိုနွေဦးရေ မှန်ပါတယ်နော် နေရာတွေဘယ်လောက်ဝေးဝေး အမေ့မေတ္တာတွေကအနီးနားလေးမှာရှိနေပါတယ်..။
တကယ့်ကို… ထိ ထိ ခိုက်ခိုက် ခံစား ရတဲ့ ကဗျာ..ပါ ။
တကယ့် ခံစားချက် အစစ် မို့ …ထင်ပါတယ် ။
စိတ်ထဲမှာ… ခံစားချက်တွေ..နဲ့မွန်းကြပ် လာတဲ့ အခါ…
မျှဝေ..ခံစားပေးမယ့်…. ကျွန်တော်တော်တို့ ရှိနေတယ်..ဆိုတာလေး..သတိရပြီး…
စာသားတွေ ကို..ချရေးပြ ပါနော်…။
padauk moe says:
ကြိုးစားရှာဖွေရင်း အမေနဲ့ တွေ့ဖို့တစ်နေ့
ဦးခိုက်ရှစ်ခိုး သားသမီးတို့ရဲ့ မြတ်နိုးမှုတွေ
ရင်မှာ အစဉ်ပျံ့လွှင့်နေဆဲဘဲလေ မေမေရေ
အားပေးခဲ့တယ်ပါဗျာ အော်မရွှေကြည်ရေ စိတ်အားငယ်ခဲ့ရင် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် မမ
ပိတောက်မိုးရေ လက်ဆောင်လာယူမယ်လေ မှတ်မိသေးလား
ကျွန်တော့် ရဲ့ပြောမနာဆိုမနာ..ကိုင်ပေါက် ရင်တောင်.. ပြုံးပြုံး…ကြီးငြိမ်ခံနေကျ..အကောင်ပါ ။
အခုတော့ရွာထဲဝင် လာပြီး..သူ့ ကိုယ်သူ..ကဗျာဆရာ.ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင် လုပ်နေထှာပါ ။
ကျွန်တော်က ..သူ့ ကို အခု..ကဗျာဆ၇ာမကြီး…မကြီးစိုး..လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
နာမည်ရင်းက စိုးမိုး…ပါ ။ မမမရွှေကြည်လိုပဲ….
ခြင်သေ့ ..နိုင်ငံကိုေ၇ာက်နေပါတယ် ။
အကူအညီ.လိုရင် ဖြစ်ဖြစ်… /… အရေးကြုံရင်..ဖြစ်ဖြစ်…
ရွာသူ..ရွာသား အချင်းချင်း..ဆက်သွယ် နိုင်အောင်…တဲ့ 
သူ့နံပါတ်လေးပေးနေတာပါ ။
ငါတော့… နင့်ကိုချစ်လို့ .. စတာနော် ။.
စိတ်မဆိုးနဲ့ ..မသာမရယ်.. ။
မသာမလို့ခေါ်မှတော့ ဆိတ်ဆိုးပြီပေါ့ဟဲ့
မမရေ အလင်းစက်ကတော့ စနေပြန်ပါပြီ ကျွန်တော်က ကဗျာကိုခံစားကြည့်တာပါ ရေးတက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး သူ့လိုဘဲခင်နိုင်ပါတယ်နော် ကျွန်တော်နဲ့က ပြောမနာဆိုမနာတွေပေါ့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော် ပါခဲ့ရင်တောင် စေသနာအမှားတွေပါ
အလင်းဆက်ရေ မှတ်ထားလိုက်မယ် မကြီးစိုးကို
အိုက်ဗူး အမြတ်ထုတ်သွားပြီ ဟိ ဟိ :harr:
မတာမ….. မိပိတောက် ( မကြီးစ်ိုး ) ..နင့်ကြောင့်…..
အဲ..လေ… ငါက စ..ဆဲတာကို……
ပျော်ရွှင်…လို့ .စ ကြ နောက်ကြတာသာ…ဖြစ်ပါကြောင်း….
အပြင်မှာဆို..ညည်း မလွယ်ဘူ…မတာမ မကြီးစိုး… )
စိန်ဗိုက်ဗိုက်ရေ လက်ရာကတောင် တယ်ပြောင်တာကိုးဗျ လန်းတယ်ဟေ့
ဟဲ့ စိတ်မပူ နဲ့ ဆိုပေမဲ့ သူ့ဟာသူ စိတ်ပှုနေတာဘဲတော် ။။
သမီး အလိမ္မာ လေး ကျမ်းမာ ချမ်းသာပါစေ။ အလုပ်ရှင် သူတော်ကောင်းများ နဲ့ ဆုံတွေ့ပါစေ ဆိုတာ အမြဲဆုတောင်းနေတာဟဲ့ . အေးအေး ဖုန်းကတော့ အဆင်ပြေ မှ ဆက်နော် .. တစ်မြေရပ်ခြားမှာ ဆိုတော့ ပိုက်ဆံဆိုတာ ခြေစောင့် လက်စောင့် ထားရတယ် ..
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော် .. အပြင်ထွက်ရင် ထီးယူသွားဖို့လည်း မမေ့နဲ့ ။။ စကာင်္ပူ မိုးက မပြောမဆိုနဲ့ ရွာတတ်တယ် လို့ ကြားဖူးတယ် အေ့…
စီဂျေကြီးကထူးဆန်းရေ တော်လိုက်တာနော် အရမ်းကြိုက်လို့စိမ်းပစ်လိုက်ပြီ..။
မမရွှေကြည်… ရဲ့ … ဘွားတော်ကြီးလား…
ဟို… xxxxxxxxxx မ… မကြီးစိုး…
အားရ ၀မ်းသာ ဖြစ်နေလိုက်တာ..။
နင် ပြန်လာမှ… ငါ့…လက်ချက်နဲ့ ထွက်စေရမယ်… အသက်…။
အမေကို လွမ်းလို့ စာကိုစီတဲ့ မရွှေကြည်
ဘဝငွေစီပြီး အလှတွေသီကာ ခနေခြည်ဖြာသလို
အလင်းဆက်၊ ပိတောက်မိုး နဲ့ အိုက်ဗူးတို့ကြောင့်ရယ်မောမိပါတယ်..။ စကြပါ နောက်ကြပါ ရပါတယ်..။
အဝေးရောက်စ အိမ်လွမ်းတတ်သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို ကျွန်တော်လည်း နားလည် ခံစားတတ်ပါတယ်။ အခု မရွှေကြည် ရေးထားတဲ့ စာတွေမှာလည်း ဒီလို အရိပ်တွေ ထင်ဟပ်နေတာပဲ။ မျှော်လင့်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ တစ်နေ့၊ အိမ်ကို ပြန်ရတဲ့တစ်နေ့မှာ မရွှေကြည် ချစ်သော အမေ။ အဖေ၊ ဆွေးမျိုးဉာတိများနဲ့ ပျော်ရွှင် ဝမ်းမြောက်စွာ ပြန်လည် ဆုံဆည်းကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မောင်ငယ်အံစာရေ ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူးကွယ်လောကီလိုအပ်ချက်တွေကအဆုံးမသတ်ပါဘူးကွယ်
အိမ်ပြန်ချိန်မှာ အဖေ အမေ ဆိုတာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါစေပဲ ဆုတောင်းနေမိတယ်..။
ခုမှသိတယ် ။ရွာထဲသိပ်မရောက်လို့သတင်းပြတ်နေတာ
ကဲ ကဲ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းရဲ့  ဝတ္ထုထဲက
နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကျော်ဆိုတော့ နဲနဲပဲမှတ်မိတော့ တယ်နော် …
ဒို့တစ်တွေသည်
တစ်ခါပြန်၍ ဆုံပါစေ ……….။
ဆုံချင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေကြောင်းးးးးးး
ကိုရင်ဆာမိရေ ပျောက်နေတာကြာပြီ..။ ပို့စ်တွေမျှော်နေတယ်။
ကဗျာလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ဆုံချင်တာကတော့မိသားစုနဲ့လေ အထူးသဖြင့်အမေနဲ့ပေါ့..။